Manamarika Ny Lohataonan’ny Nosy Grika Ao Chios Ny Lalady na ny Voninkazo Tiolipa ao An-toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2017 15:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Italiano, Nederlands, Español, Français, Aymara, عربي, Ελληνικά
Ny Tiolipa ao amin'ny Nosy Chios, Avaratr'i Egée. Sary avy amin'ny mpanoratra
Rehefa mandre ny teny hoe tiolipa ianao, dia mety hieritreritra an'i Holandy, na mety hieritreritra ny tiolipa-mania tamin'ny taonjato faha-17 mihitsy aza. Kanefa fantatrao ve fa antsoina hoe “Vanim-potoan'ny tiolipa” (Lale Devri) ny vanim-potoana volamenan'ny Fanjakana Ottoman? Lova kely iray monja amin'ny fomba ahitana ny voninkazo any an-toeran-kafa eto amin'izao tontolo izao ihany izany.
Antsoina hoe “lalady” ireo tiolipa ao amin'ny nosikely Grika Chios ao Avaratry ny Ranomasina Égée, mameno ny tanimboly sy ny sahan'oliva izy ireo amin'ny fiandohan'ny volana Martsa ary maharitra 7 ka hatramin'ny 10 andro ihany ny famelanany. Malaza noho ny hazo mastika fanta-daza ihany koa ary, vao haingana, fantatra tamin'ny fanekena ny fandraisana ireo mpifindra monina sy mpitsoa-ponenana marobe avy any Afovoany Atsinanana tamin'ny alàlan'i Torkia i Chios ary efa hatry ny ela izy no nanamarika ny lohataonany tamin'ny famelan'ireo tiolipa. Fambolena nentim-paharazana ity voninkazo izay mamelona ny mponina ambanivohitra ity.
Avy ao Azia Afovoany no tena fihavian'ireo tiolipa ary miparitaka manerana ny faritra Mediteranea sy hatrany afovoany sy atsinanan'i Eoropa. Miresaka ny tantaran'ilay voninkazo ny voambolana hoe lalady ao Chios: anarana Persiana milaza ny tiolipa ny lale, izay niditra tao amin'ny tenim-paritra Chian tamin'ny alalan'ny teny tiorka tatỳ aoriana.
Karazana tiolipa miisa efatra ambin'ny folo no ambolena ao Gresy, efatra amin'izany no hita manokana ao amin'ny faritra afovoany sy atsimoatsinanan'ny nosy Chios (Tulipa praecox, Tulipa agenensis, Tulipa clusiana, Tulipa undulatifolia).
Lalady ao an-tanànakelin'i Kallimassia, Nosy Chios. Hita ao aoriana ihany koa ireo hazon'oliva sy hazo mastika. Sary avy amin'ny mpanoratra
Antsoina ao an-toerana hoe lala Tiorka ny Tulipa praecox. Miloko mena midorehitra ary mahatratra hatrany amin'ny 70 santimetatra ny haavony, ary matetika no hita manodidina ny tanimboly sy ny sahan'oliva izy.
Antsoina ao an-toerana hoe lala Frankish ny Tulipa agenensis, mahatratra hatrany amin'ny 50 santimetatra sy manana felany mena misy teboka mainty sy loko mavo mitsoriadriaka ny ao anatiny.
Ny Tulipa undulatifolia dia karazana tiolipa iray tsy fahita firy sy tandindonin-doza ihany koa, mahatratra hatrany amin'ny 30 santimetatra ny haavony, miaraka amin'ny felany milokom-boasary mena sy ny raviny miolakolana. Hita eny amin'ny faritra fambolena ihany koa izy ity, ary matetika eny akaikin'ny sahan'ny pistacia .
Farany, ny Tulipa clusiana, fantatra ao an-toerana amin'ny anarana hoe lala Constantinople na Babylonianina, dia mitombo hatrany amin'ny 60 santimetatra sy mamelana fotsy mitsoriadriaka jaky midorehitra ety ivelany. Tsy fahita firy ity karazana ity, ary avy any Persia.
Harena voajanahary sarobidy ho an'ny nosy Chios ny lalady. Mety handrava tanteraka ilay zavamaniry tsy manana fomba hafa haniriany intsony indray anefa ny fanangonana nentim-paharazana ny voninkazo marobe sy ny fangadiana ilay vodin-javamaniry isan-taona. Miampy izany ny fandaozana ny fomba fambolena nentim-paharazana sy ny fampiasana ny fomba maoderina amin'ny fiavàna ny faritra midadasika ka manimba ilay vodin-javamaniry.
Jereo kely ny lahatsary eto ambany ho fanomezana topimaso mampitony saina ireo voninkazo ao amin'ny nosy Chios , nalain'i Panos Mavrakis ary nalefany tao amin'ny fantsony YouTube izay mampiseho ny karipetra menan'ny tiolipa tsy manam-pahataperana ao Chios: